Taliyaha Nabad Sugida Qaranka Oo Xalay Kormeeray Isgoysyada Magaalada Muqdisho – Radio Muqdisho
Taliyaha Hey’adda Nabadsugida iyo sirdoonka Qaranka Gen C/raxmaan Maxamed Tuuryare ayaa xalay Saqdii dhexe Kormeeray Xaruumaha Ciidamada Qalabka sida ee magaalada Muqdisho islamarkaana gudanayay waajibaadka Qaran ee Dalka iyo dadka ay u hayaan si uu ugu kuur galo Xaalada Amni ee magaalada Muqdisho.
Taliyaha Hey’adda NISA Ayaa kormeerkiisa ka bilaabay Isgoysyada Magaalada Muqdisho, wuxuuna wax ka weydiinayay Ciidamada oo Isugu jira Boliiska iyo Nabad sugida Xaalada Ammaan iyo sida ay u sugayaan Ammaanka, iyadoo Ciidamadaasi ugu warbixinayay Howsha baaxadda leh ee xiligaasi ay u taaganyihiin.
Taliyaha Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ayaa meelaha uu booqday waxaa ka mid ah wadada Maka Al Mukarama iyo wadada isku xirta Garoonka Aadan Cadde iyo KM4, waxaana halkaasi uu kula kulmay Ciidamo ka tirsan NISA, iyadoo saraakiisha Ciidan ee ku howlanaa sugida ammaanka ay warbixin ka siiyeen sida ammaanka uu yahay oo ay u sheegeen in xaaladda amni ay tahay mid wanaagsan.
intaasi kaddib Taliyaha Taliyaha Hey’adda Nabadsugida iyo sirdoonka Qaranka Gen C/raxmaan Maxamed Tuuryare waxaa uu u jiheystay Dhanka Madiina oo ugu tagay Ciidamo ka Tirsan NISA oo Xarun amni oo ku taala inta u dhexeysa Garoonka Aadan Cadde iyo Madiina ku sugnaa, iyadoo warbixin uu ka dhageystay Sarkaalka Ciidankaasi madaxda u ahaa oo u sheegay in Xaalada amni ay wanaagsantahay waxaana talo uu ka siiyay Taliyaha Sugida amniga.
Taliyaha oo ilaa saakay Waabarigii ku guda jiray kormeerkiisa la xiriira Sugida amniga ayaa Booqday xarunta KMG ah ee Wasaaradda Amniga oo ay u soo jeedaan sidii amniga wasaaradda ay u sugi lahaayeen Ciidamo ka tirsan NISA, waxaana Gen Tuuryare uu Awaamiir la xiriirta Xoojinta Amniga uu siiyay Ciidamada.
Kormeerka Taliyaha Hey’adda Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka Gen C/raxmaan Tuuryare ayaa qeyb ka ah Dhiir galinta Ciidamada oo habeen maalin u soo jeeda u qidmeynta Dadka Shacabka , waxaana kormeerkani uu qeyb ka yahay Soo bandhigida amniga guud ee ka jira caasimada.
Cabdifataax Cumar Xalane oo loo magacaabay Afhayeenka Maamulka G/banaadir